Mpanaparitaka manokana any Torkia ho an'ny milina fanesorana volo amin'ny laser
Miarahaba anao noho ny fiaraha-miasanay amin'ny mpaninjara manokana an'i Torkia ho an'ny milina fanesorana volo tamin'ny laser tamin'ny 10 Oktobra 2018 ka hatramin'ny 10 Oktobra 2022! Ho an'ireo mpanjifa Irana izay liana amin'ny masinina fanesorana volo amin'ny laser, azafady mifandraisa amin'ilay mpaninjara manokana an'i Iran. ...
1: anarana freckle ： Age ： 21. asa: famantarana ny mpianatra: miavaka amin'ny teboka mavo na volontany mainty, boribory, boribory na tsy ara-dalàna. Mazava ny fari-tany, manodidina ny 2mm ny savaivony, malama ny faritra, mitokana ary tsy mitambatra, ary hafa ny fizarana. fitiliana ： frec ...
Ny orinasa Sano Laser dia manatrika fampirantiana any Dubai, Espana, Italia, Torkia, Polonina ary Romania isan-taona. Ity dia sary rehefa manatrika ny India Exhibition isika. India no tsena lehibe ao amin'ny orinasanay. Manana mpizara be dia be izahay any India. Ary tonga any India in-3-4 isan-taona izahay. Amin'ny fampirantiana Torkia, ny diode ...
Masinina fivarotana mafana No.1 amin'ny taona 2020- Masinina fananganana hozatra HIFEM EM-sculpt
Masinina fananganana hozatra Magshape HIFEM EM-sculpt no milina Top 1 mivarotra ao amin'ny orinasako amin'ny taona 2020. Teknolojia vaovao io, nefa mivarotra be izao! Magshape dia famolavolana vatana sy fitaovana fananganana hozatra marobe. Izy io dia mety amin'ny fampihenana, famolavolana, ...
Laser estetika Co2, fanesorana ny holatra, Shr Ipl Opt, Fanesorana volo Shr Opt Ipl, Co2 Laser Laser miato, Masinina mpanentana hozatra Ems,